Njegharị nke TuxGuitar, ndị GuitarPro Linuxero | Site na Linux
Njegharị nke TuxGuitar, GuitarPro Linuxero
Ogologo oge gara aga ka anyị nyochara Ntughari, A ngo sitere na Argentina nke bụ free ọzọ ka Guitar pro, mara nchịkọta akụkọ.
Lee, aga m ekwu maka mmemme a na-anwa ịga dị ka m nwere ike ma gosipụta ọrụ ọ nwere.
Ọ bụ ngwa dị mfe iji, ọ dịghị mkpa ịnweta mmụta dị elu iji jiri ya.
Gaa maka ya:
Mgbe anyị mepere mmemme ahụ, windo nke pụtara bụ nke a, n’ime ya ihe izizi dọọrọ uche anyị bụ olu, nke dị na ala, nke akara akara na eriri na-ada ụda oge niile.
N'adịghị ka Guitar Pro, olu a nwere frets 23 kama 24, nke nwere ike ịdị njọ ma ọ bụrụ na anyị na-egwu egwu Steve Vai-ụdị nkume siri ike ma ọ bụ na-egwu ígwè.
Anyị na-ahụkwa akụkụ nke aka nri, nke anyị na-ahụ n'ámá nke agba dị iche iche, ngalaba a na-egosi akụkụ nke abụ anyị nọ n'ime ya.
Anyị na-achọta akara ngosi, anyị nwere ike itinye ndị anyị chọrọ, otu maka ụda ọ bụla akụrụngwa, ọ bụghị otu maka akụrụngwa ọ bụla, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na abụ a na - eji synthesizer mee ihe atụ Lead Square na Grand Piano anyị ga - emerịrị usoro egwu maka Lead Square na ọzọ maka Grand Piano, n'agbanyeghị na anyị mechara bụrụ Jordan Rudess Nrọ )lọ ihe nkiri) na anyị nwere ike ịgbanwe ụda na-erughị puku nke abụọ.
Otu n'ime egwu ndị a nwere ụda dịka m kwurula, usoro a nwere ụda ọnụọgụ na-enweghị ngwụcha. Kedu ka ha si ada? Ha na-ada ụda nke ọma ma ha na-arụ ọrụ ha n'ụzọ zuru oke.
Otu ihe anyi kwesiri iburu n’uche bu na mgbe anyi meputara uzo anyi kwesiri igosi ma o bu egwu ma o bu ngwa egwu.
Maka akụrụngwa idiophone (xylophone, metallophone, chime, wdg) anyị kwesịrị ịhọrọ usoro egwu dị mma, ebe ọ bụ na a na-akọwapụta idiophones na-akụ akụ, ya bụ, ha na-enye ndetu nke ọnụ ọgụgụ ahụ.
Nke a bụ menu nhọrọ, na ya anyị nwere ike gbanwee ụda nke egwu ọ bụla, ọnụọgụ nke akụrụngwa na ntinye ya, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na egwu ahụ bụ nke akụrụngwa na-adịghị mkpa ịmụrụ ma ọ bụ enweghị eriri, ebe a anyị ga-ejikwa tuning na ọnụ ọgụgụ nke ndido urụk kemgbe niile nkịtị tracks na-setịpụrụ ndabara na guitar n'olu.
N'adịghị ka Guitar Pro onye a enweghị mgbatị 12 eriri, nke abụghị nsogbu.
N'okpuru ogwe ngwaọrụ anyị nwere ike ịchọta oge nke ndetu ọ bụla, nkeji iri na ise, White, Gburugburu, Akwụkwọ nke asatọ, wdg ebe ọ bụ na oge ọ bụla anyị dere akwụkwọ, anyị ga-ahọrọ oge ya.
N'ebe a, anyị na-ahụ bọtịnụ bọtịnụ, nkwupụta egwu na ha abụọ n'otu oge. Tohọrọ ngosipụta, ọ dabere na ihe ọmụma anyị ga-agụ otu ụdị mpempe akwụkwọ egwu ma ọ bụ nke ọzọ.
Mgbe ahụ, anyị nwere bọtịnụ playback, nke bụ ụdị Play, Stop, Pause, wdg.
M ga-ahapụ peeji nke ebe anyị nwere ike ibudata akara na usoro Guitar Pro, a na-akpọ ibe ahụ Tablatures.tk
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Njegharị nke TuxGuitar, GuitarPro Linuxero
M arụnyere usoro ihe omume ma mgbe m na-akpọ track ọ enweghị ụda. Adị m ọhụrụ nye Ubuntu na ụdị m bụ 12.10, kedụ ihe m ga-eme?
Ọ bụ eziokwu, dị ka a pụrụ ịhụ n’ebe a:
Otú ọ dị, ọ bụghị free software na ọ bụ a na-akwụ ụgwọ ngwa. Ma hey… maka ndị na-echeghị echiche, ọ nwere ike ịbụ nhọrọ na-adọrọ mmasị.
Umunne nke igwe, a huru m na I na-amu. Lee ọ joyụ ọ bụ!
haha m si Argentina ma m na-eme cumbia reggaeton na merengue, m dogidere studs m ogologo oge, naanị ihe m hapụrụ bụ ogologo ntutu,
Ekele m obodo
Enwere m olile anya na ị naghị ekwu ya ... Anyị maara esemokwu dị n'etiti metalheads (m) na reggaeton ...
Mana hey, ọ bụkwa nke ọ bụla, enwere ụfọdụ reggaeton na mụ na ya dị
nke ọma, anyị agaghị alụ ọgụ maka ụdị egwu ... hahaha A hug XD
Batman ya mere m ji kwuo na ọ dabere na onye ahụ
Ha jọkarịrị njọ karịa stallman!
Ndewo, ị kwesịrị ịnwale Jack_capture, ị na-egwu egwu ma jide ọdịyo ahụ, Ahụbeghị m ya ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ na Jack2 iji hụ ma enwere ike ijide nhọrọ freewell
Andres Cordova kwuru dijo
Enwere guitar PRO 6 maka Linux.
Zaghachi Andres Cordova
Enwere Guitar Pro 6 maka Linux
Elegharala m anya nke ukwuu mana ihe ngwọta ọzọ bụ ịchọ ihe dịka GarageBand maka Linux, echere m na mmemme ahụ si na MIDI bubata
Ndewo Obi ike, post ahụ dị ezigbo mma. Dị ka anyị dị, a na m ajụ gị: ọ ga - ekwe omume na mmemme a nwere ike ịgbanwe faịlụ ụda (wav ma ọ bụ mp3) na tablature ma ọ bụ mpempe akwụkwọ? ị nwere ike ịgụ midi ma gbanwee ya na tablature? Ka obu na inwere iji aka gi dezie abu x iji nwee ike ige ya?
Ihe m maara ugbu a bụ na ị nwere ike nweta x abụ na mmemme ma ọ bụ usoro guitarpro, mana enwere m obi abụọ a. Daalụ maka post ahụ, ana m echere nzaghachi gị.
Nwoke, adịchaghị m mma na nhọrọ ịkwụ ụgwọ inwe nke a n'efu nke na-eme m otu ọrụ ahụ, ihe ọzọ bụ na ọ chọrọ ọrụ akọwapụtara. Na mgbakwunye na otu onye dị ọcha agaghị anabata Guitar Pro
ekenekwaa m unu
Echere m na a ga-anabata m ebe a, mana m hụrụ na m hiere ụzọ.
Nke ahụ bụ ihe m bụ maka mmadụ, ịgwa
Ọ nwere ngwa mgbakwunye akpọrọ Midi Njikwa faili Mbubata-mbubata ngwa mgbakwunye.
Anwalebeghị m ya kama ọ dị ka ọ bụ maka ihe ị gwara m.
Anyway aga m agbakwunye otu ihe na post, nọrọkwa na nche
Ndewo, enwere m nsogbu na guitar pro na ọ bụ na opi na soprano sax ụfọdụ ndetu, enweghị usoro na-ada ogbi na amaghị m onye ga-echigharị iji gwa m nsogbu a na-akpasu iwe. Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu.
Ndewo, anọ m na-anwale, n'ikpeazụ tuxguitar nwere nhọrọ ịbubata etiti site na menu "Njikwa", nsonaazụ ya nwere ike ịdị iche ma bụrụ nkenke ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ dabere na mgbagwoju anya nke abụ na ụdị ngwa ọ na-eji, mana ọ dịkarịa ala ọrụ. Nanị ihe m hụrụ maka ịtụgharị ụdị ụda ndị ọzọ bụ ịtụgharị ha na midi, wee bubata ha na TG. Ihe ngwọta, ma ihe ngwọta.
Na Ọnụ: vingkwalite ọdịdị nke njikwa